Amava kwi-127th Canton Fair
Ukuchaphazeleka kwimeko yobhubhane, i-127th Canton Fair yabanjwa kwi-Intanethi kwaye yaphela ngokugqibeleleyo. Amathuba kunye nemiceli mngeni zihlala kwiCanton Fair ekwi-Intanethi, eluvavanyo kwiinkampani zorhwebo zase China kunye nabavelisi. Iqela leHaurui lithatha inxaxheba ...
Loluphi uhlobo lwesitulo sangasese olukhethayo?
I-MDF (Medium-Density Fiberboard) yimveliso eyenziwe ngomthi ecofa ifayibha yeplanga kwibhodi ethe tyaba phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo, emva koko iya kunqunyulwa ukuba yenze imilo. Nokuba umbala we-Uni-color okanye ugqunywe yipatter yokuhombisa ...
UMphathiswa Wezorhwebo we-PRC uthathe isigqibo sokuba i-127th Canton Fair iya kubanjwa kwi-Intanethi ukusukela nge-15 kuye kwi-24, 2020.
I-China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle ("I-Canton Fair" okanye "I-Fair"), eya kubanjwa ukusukela nge-15 ukuya kwi-24 kaJuni, imema abathengi abangaphezulu kwama-400,000 kwihlabathi liphela ukuya kumboniso wayo we-127 nowokuqala kwi-Intanethi. Ngokusebenzisa amaqonga edijithali, iCanton Fair iya kuqhubela phambili ikhuthaze ukuqala kwakhona kweshishini kunye ne ...